Warbaahinta Bulshada Fest 2021 Dib u eegista | Qeexid, Ka Qaybqaadasho - Wareegga Maalka
Bogga ugu weyn Warbaahinta Bulshada Fest 2021 Dib u eegista | Qeexid, Ka Qaybqaadasho
Warbaahinta Bulshada Fest 2021 Dib u eegista | Qeexid, Ka Qaybqaadasho
Sawirka Sawirka: socialmediafest.org
Ma isu aragtaa inaad tahay qof hal -abuur leh? Miyaad ka shaqeysaa goob hal abuur leh? Mise waxaad leedahay fikrad cusub? SMFest waa shir sanadle ah oo isu keena maskaxda ugu fiican uguna dhalaalka badan adduunka.
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, waxaa jiray wacyigelin sii kordheysa oo ku aaddan saameynta warbaahinta bulshada, iyo sidoo kale faa'iidooyinka ka faa'iideysiga siyaabo cusub oo lagu hagaajinayo bixinta adeegga macaamiisha adeegga.
Taasi waa sababta Warbaahinta Bulshada Fest waa dhacdo bixisa fikradahaas, soo -gaadhista, iyo garashada waxay dadka iyo ganacsiyada ka caawiyaan inay fahmaan sida wax badan loogu gaari karo digitalization -ka.
Meesha ay dadku leeyihiin isku kalsooni hoose iyo filashooyin hooseeya, heerka hal-abuurka laga helay beeshan ayaa u saamaxaysa inay bilaabaan inay ka xoroobaan qaababka taban ama is-halaaga ah oo ay bilaabaan inay dhisaan sheeko cusub oo dhiirrigelisa soo kabashada.
Sidoo kale, ku hadlayaasha lagu casuumay SMFEST waxay aad u danaynayaan inay wadaagaan sheekooyinkooda guusha, bilaabaan dood, ama laga yaabee inay soo bandhigaan soo jeedin diirada saarta mustaqbalka. Ugu dambayntii, dadka hadlaya ayaa halkaas u jooga inay ka caawiyaan ganacsiyada maxalliga ah kobcinta iyo inay noqdaan kuwo guulaysta.
Sidaa darteed, tani waxay u saamaxaysaa ka -qaybgalayaashu inay samaystaan ​​isku -xidhyo cusub, wada -shaqeeyaan, oo u fikiraan siyaabo cusub.
Marka, haddii aad had iyo jeer dooneysay inaad ku xirnaato oo aad la shaqeyso dadka hal -abuurka leh, waxaad ku dhowdahay inaad akhrido wax horumarkaaga u horseedi doona heerka xiga.
Waa maxay Fest Media Social?
Warbaahinta Bulshada Fest waa dhacdo sanadle ah oo kulmisa maskax hal abuur leh oo doonaysa inay hibaddooda u riixdo heerka xiga.
Waa dhacdo siisa dadka iyo ganacsiyada fikrado, soo -gaadhis, iyo aragtiyo si looga caawiyo inay fahmaan sida wax badan loogu gaadhi karo digitalization -ka.
SMFest waxaa iska leh oo soo saaray Farsamooyinka Silicon Africa.
Hadafkoodu waa inay dhisaan bulsho hal abuur leh oo sare u qaadaysa warbaahinta bulshada si ay u koraan saamaynta iyo kordhinta aragga.
Iyada oo loo marayo kumanaan dhacdooyin, SMFest waxay ujeeddadeedu tahay inay noqoto barxad siisa fursado ay ku Xirmaan, Cusboonaysiiyaan, iyo Koraan.
Sidee U Shaqeeyaan Warbaahinta Bulshada?
Ujeeddadu waa in lagu caawiyo dadka Afrikaanka ah inay si wanaagsan uga faa’iideystaan ​​baraha bulshada iyo xirfadaha kale ee dhijitaalka ah, waana sababta mowduuca munaasabadda sannadkan loogu magac daray “Sawirka Weyn.
Waa kuwan waxqabadyada qurxiya Fest Social Media:
1. Kulamada Barista
Kuwani waa fadhiyada caadiga ah ee laga heli karo barnaamijyo iyo dhacdooyin badan. Waxaa jiri doona ku dhawaad ​​afar (4) xubnood oo khudbad ka jeedin doona kalfadhigan kuwaas oo soo bandhigi doona mowduucyo kala duwan oo ku saleysan waaya -aragnimadooda iyo xirfadahooda warshadaha.
Kulan kasta wuxuu socon doonaa qiyaastii 45 daqiiqo illaa saacad, mar walbana waa wax xiise leh in la maqlo sheekooyinka khubaradan iyo inta ay gaareen.
2. Kalfadhiyada Goosashada
Siminnaarkan oo kale way adag tahay in laga helo dhacdooyin badan, laakiin SMFest ayaa kuu soo gudbineysa.
Adiga iyo koox dad ah oo danaynaya barashada khibrad gaar ah, sida waxbarashada, horumarinta bulshada, madadaalada, iyo wax ka badan, ayaa isugu soo ururi doona fadhiyadaan si aad wax uga barataan fududeeyaha.
Waxaad weydiin kartaa su'aalo, doodi kartaa, waxna ku biirin kartaa fadhigan oo dhan. Waxay ballanqaadaysaa inay noqoto mid xiise leh mar walba.
3. Kulamada Guddiyaasha
Kuwani waa muxaadarooyin xiiso leh oo waliba u adeega nooc ka mid ah waxbarashada guud ee dhammaan ka -qaybgalayaasha.
Kalfadhigan, dhowr khabiir ayaa fadhiisan doona oo ka jawaabi doona su'aalaha dhagaystayaasha ee ku saabsan mowduucyo kala duwan.
Kulamada guddiyadan ayaa ah kuwo cajiib ah si meesha looga saaro madmadowga iyada oo sidoo kale la bixinayo faallooyin isku dhafan oo cajiib ah si loo caawiyo fahamka.
Sideen Uga Qeyb Galaa Fest Media Social?
Siinta waqtigaaga si aad gacan uga geysato sidii Media Social Fest loogu guuleysan lahaa waa fursad weyn oo dib loogu soo celiyo bulshada oo saameyn muddo dheer ku leh nolosha dadka kale.
Waxaa jira saddex meelood oo aad kaga qayb qaadan karto Fest Media Social.
Waxaa muhiim ah in maskaxda lagu hayo in dhinac kasta oo aad go'aansato inaad doorato, waxaad siin doontaa waqtigaaga iyo dadaalkaaga sidii SMFest loogu guulaysan lahaa.
1. Kafiil ahaan
Mid ka mid ah hababka ugu wax ku oolka badan ee kor loogu qaadayo sumaddaada iyo ganacsigaaga ayaa ah in la kafaalo qaado SMFest.
Waxaad hubsan kartaa inaad ka soo qeyb gasho munaasabad lagu soo ururin doono maskaxda wax baratay, waxaad u abuuri doontaa hoggaamiyeyaal iyo macaamiil badan shirkaddaada.
Guji badhanka hoose si aad u noqoto kafaala -qaade dhacdadan.
2. Isxilqaan ahaan
Iskaa wax u qabso SMFest waa hab aad u fiican oo wax lagu barto, dadka lala shaqeeyo, iyo ballaarinta shabakaddaada.
Sida iskaa wax u qabso ugu samee dhacdadan, waxaad si fiican u fahmi doontaa hawlgalada dhacaya si loo hubiyo in barnaamijka lagu guulaysto.
Tani adiga ayay faa'iido kuu leedahay maxaa yeelay waxaad u adeegsan kartaa khibradaada fursado mustaqbalka ah.
Guji badhanka hoose si aad tabaruc ugu noqoto dhacdadan.
3. Ka -qaybgale ahaan
Ka -qaybgale ahaan Fest Media Fest, waxaad heli doontaa fursad aad kula xiriirto dad hal -abuur leh oo kaa caawin kara kobcinta ganacsigaaga ama sumaddaada.
Maalgelinta ururka ee dhacdadan awgeed, waayo -aragnimada imaanshahaagu waxay noqon doontaa wax aan farxad lahayn.
Ka Qaybgal Dhacdada
Sideen U Heli Karaa Tigidhada Fest ee Warbaahinta Bulshada?
Haddii aad rabto inaad iibsato tigidhada xafladda warbaahinta bulshada, waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad internetka gasho.
Iyada oo ku xidhan nooca tigidhka aad iibsanayso, waxaa jira saddex nooc oo tigidhada loo heli karo dhacdada.
Tigidh kastaa wuxuu leeyahay faa'iidooyin u gaar ah, laakiin dhammaan tigidhada ayaa dammaanad qaadaya inaad qayb ka noqon doonto barnaamijka.
1. Tigidhka Aasaasiga ah
Tigidhkani wuxuu ku kacayaa #5, 000, laakiin waa #3,000 shimbirta hore. Waxay leedahay faa'iidooyin kala duwan laakiin lama barbar dhigi karo Heerka iyo Premium.
Waa kuwan faa'iidooyinka tikidhada aasaasiga ah:
Helitaanka shabakad khubaro warshadeed.
Jotters -ka summada leh iyo Qalinka
Iibso Tigidhka Aasaasiga ah
2. Tigidhka caadiga ah
Tigidhkani wuxuu ku kacayaa #10, 000, laakiin waxaa loo jaray #7,000 oo loogu talagalay Shimbiraha Hore.
Sida caadiga ah, waxaa jira faa'iidooyin ku lifaaqan tan, waxaa ka mid ah:
Helitaanka 10+ kalfadhi oo ah warshado heer caalami ah
Xusuus-qoryo Summadaysan (funaanad, Jotter iyo Qalin).
Nibbles aan rasmi ahayn.
Iibso Tigidhka Caadiga ah
3. Tigidhada qaaliga ah
Tigidhkani wuxuu ku kacayaa #15,000, laakiin waxaa loo jaray #12,000 oo loogu talagalay Shimbiraha Hore.
Faa'iidooyinkiisu waa kuwa ugu sarreeya maadaama ay ka duwan tahay tigidhada kale ee la heli karo.
Helitaanka tigidhka Premium wuxuu kuu muujinayaa waxyaabaha soo socda:
Qabanqaabada fadhiga safka hore.
Helitaanka 10+ kalfadhi oo khubarada warshadaha heer caalami ah.
Sooyaal xusuus leh (T-shirt & Cap, ama Hoodie, Jotter iyo Pen).
Helitaanka agabka barnaamijka.
Iibso Tigidhka Lacagta Badan
Guji astaanta hoose si aad wax badan uga ogaato tikidhada iyo sifooyinkooda.
Waa maxay Shuruudaha Diiwaangelinta ee Fest Media Social?
Waa inaad dhammaystirtaa diiwaangelintaada si aad uga qaybgasho dhacdadan cajiibka ah. Iyada oo ay jiraan shuruudo, habka diiwaangelintu waa mid deg deg ah, fudud, oo hufan.
Shuruudahaan waa sida soo socota:
Magaca oo buuxa: Magacaaga waa in lagu daraa nidaamka diiwaangelinta. Sababtoo ah, sida odhaahdu tidhaahdo, “magacaagu waa aqoonsigaaga,” waa inaad dammaanad qaaddaa in magacaaga si sax ah loo higgaadiyo si aad isu diiwaangeliso.
Cinwaanka emailka: Baahida diiwaangelinta kale ee muhiimka ah waa cinwaankaaga iimaylka, kaas oo aad u baahan doonto si aad u dhammaystirto diiwaangelintaada SMFest. Fadlan xasuuso furaha cinwaanka iimaylkaaga maxaa yeelay waa meesha aad ka heli doonto tigidhadaada dalwaddii iyo macluumaad kale.
Lambarka taleefanka: Lambarka taleefankaaga waa inuu noqdaa nidaamka si aad farriimaha qoraalka uga hesho nidaamka oo kugu wargeliya xaaladda diiwaangelintaada iyo dhacdooyinka kale ee muhiimka ah ee la xiriira dhacdada.
Had iyo jeer isticmaal lambarka taleefanka ee aad hadda isticmaaleyso.
Qaabka mushaar-bixinta: Paystack ayaa mas'uul ka ah habka lacag bixinta ee dhacdadan. Sidaas darteed, waa inaad ku bixisaa kaarkaaga amaahda ama aad isticmaashaa koodh wareejin gaar ah si aad u dhammaystirto iibsigaaga.
Si loo soo koobo, si loo diiwaangeliyo SmFest, waa inaad:
Cinwaanka emaylka ansax ah
Waa maxay SMFest Owerri?
SMFest Owerri waa kulan sanadle ah oo maskaxda hal -abuurka ah ay ku raadinayaan fursado ay ku xiraan, ku curiyaan, kuna koraan.
Goorma ayay tahay SMFest Owerri?
SMFest Owerri 2021 wuxuu dhici doonaa 23 -ka Oktoobar 2021.
Halkee ka dhacdaa SMFest 2021?
SMFest Owerri wuxuu ka dhici doonaa Xarunta Landmark oo ku taal Plot H / 1, Nekede Pocket Layout, oo ku ag taal Protea Hotel, Owerri, Imos State
Waa maxay “Sawirka Weyn”?
Sawirka Weyn waa mawduuca munaasabadda sannadkan, oo loogu talagalay in lagu muujiyo faa'iidooyinka hoose ee warbaahinta bulshada, iyo sida aad u kordhin karto si kor loogu qaado saameyntaada.
Immisa ayay ku kacaysaa ka -qaybgalka SMFest Owerri?
Waxaad heli kartaa ruqsad aad ku xaadirto SMFest Owerri 2021 laga bilaabo 12ka Ogosto. Qiimaha shatiyada ayaa kor u kici doona 1da Oktoobar. Booqo License page ka si aad u hesho
Luqadaha Barnaamijyada ugu Mushaharka Badan 15 Sanadka 2021
Dhammaanteen waan ognahay waxa VPN-yadu sameeyaan, iyo sida ay u daboolaan raadkeenna marka aan u baahanahay. Iyadoo ay halkaas...
Dib -u -eegista Tally 2022: Tally ma tahay mid sharci ah ama khiyaano kaarka deynta?
Marna ma fududa la socoshada ku lug lahaanshaha maaliyadeed. Waxaaba ka sii daran haddii ay ku saabsan tahay bixinta…
Dib -u -eegista Mybitcointube.com 2022: Heli Seeraar Degdeg Ah Hadda Daawashada Fiidiyowga YouTube -ka
Haddii aad raadineysay dib u eegista mybitcointube.com si aad u ogaato haddii mybitcointube.com ay tahay fadeexad ama madal sharci ah,…
BASIC (luqadda barnaamijka) waa luuqad heer sare ah oo u saamaxaysa barnaamij-hayaha inuu helo si ka sii adag oo isku-dhafan…